Wararka Maanta: Khamiis, Oct 18, 2012-Baarlamaanka oo Maanta ka doodaya Miisaaniyadda ay Dowladda Somalia ku shaqeyn doonto saddexda bilood ee soo Socota
Baarlamaanka oo Maanta ka doodaya Miisaaniyadda ay Dowladda Somalia ku shaqeyn doonto saddexda bilood ee soo Socota Khamiis, Oktoobar 18, 2012 (HOL) — Xildhibaannad baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan ay maanta ku yeelanayaan xarunta golaha shacabka kaasoo ay kaga doodayaan miisaaniyadda ay dowladdu ku shaqeynayso saddexda bilood ee soo socota.Mudanayaasha baarlamaanka ayaa waxay kulankooda uga doodi doonaan nuqullo ay soo diyaarisay wasaaradda maaliyadda iyo lacagta oo shalya loo qaybiyay, si ay go'aan cad uga qaataan, iyadoo lagu wado in isla maanta ay codka u qaadaan."Waxaan maanta ka doodi doonnaa miisaaniyadda ay dowladdu ku shaqeynayso saddexda bilood ee soo socda. Sidoo kale waxaa lagu wadaa in baarlamaanka la hor-keeno miisaaniyadda sannadkas oo socda ay dowladdu ku shaqeyn doonto si cod loogu qaado," ayuu yiri xildhibaan Nuur Faarax Jaamac oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka.Kulanka uu baarlamaanku kaga doodayo miinaasiyadda ay dowladda Soomaaliya ku shaqeyn doonto bilaha soo socda ayaa wuxuu noqonayaa ajandihii u horreeyay oo xildhibaannadu ay ka doodaan, iyadoo horay uu Prof. Jawaari u sheegay in qodobka ugu horreeya ee ay ka doodi doonaan uu noqonayo dib u eegis lagu sameeyo dastuurka dalka.Arrinta sida aadka ah isha loogu hayo ayaa waxay tahay lacagaha ku baxaya xafiisyada madaxweynaha, kan guddoomiyaha baarlamaanka iyo midka ra'iisul wasaaraha; iyadoo la xusuusto in xafiisyadii madaxdii hore ay ku bixi jireen in ka badan 10-milyan oo doollar sannad walba.Kulanan ayaa wuxuu kusoo beegmayaa iyadoo shalay la ansixiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, Cabdi Faarax Shirdoon, waxaana kulankan iyo kii ka horreeyay ay noqonayaa kuwii ugu horreeyay oo laba maalmood oo isku xigta uu yeesho baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
Khamiis, Oktoobar 18, 2012 (HOL) — Wafdi ka socda urur goboleedka IGAD ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada hoose, halkaasoo ay si diirran ugu soo dhaweeyeen masuuliyiinta ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo kuwa Raaskaambooni ee ku sugan magaaladaasi. Hay'adda Wadahadalka Bulshada oo Dhallinyarada ku nool Degmada Marko u Qabatay kulankii ugu Horreeyay oo Wacyi-gelin ah 10/18/2012 6:43 AM EST
Khamiis, Oktoobar 18, 2012 (HOL) — Dhallinyaro tiradoodu gaarayso 200 oo ka kala yimid degmada Marko iyo deegaanno ku dhow-dhow ayaa markii ugu horreysay loogu qabtay maanta degmada Marko kulan wacyi-gelin ah. Kooxo bastoolado ku hubeysan oo degmada Wadajir ku toogtay guddoomiye Waaxeed ka tirsanaa maamulka Degmadaas 10/18/2012 3:59 AM EST
Khamiis, Oktoobar 18, 2012 (HOL) — Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inay sii socon doonaan dagaallada ay ciidamada dowladda Soomaaliya kuwa AMISOM kula jiraan Al-shabaab inta kooxdan laga adkaanayo ama dalka oo dhan laga saarayo. Xukuumadda Masar oo dalkeeda u diiday Muwaadiniin Soomaaliyeed oo kasoo cararay dagaallada ka socda dalka Suuriya 10/18/2012 2:37 AM EST